Waa maxay Qi Gong | Faa'iidada caafimaadka ee caafimaadka
Qi Gong | Faa'idada Fayo-qabka Caafimaadka
Farqiga ka dambeeya mudada u dhaxeysa
Jimicsiga Qi-Gong oo wanaagsan
Qof kasta oo xiiseynaya farshaxanka Asaliga ah ee maanta ayaa si degdeg ah u heli doona. Bixinta waa weyn, baahida sidoo kale. Laakiin si ka duwan, tusaale ahaan, Japanese aikido, Shiinaha Gong Fu ama Kung Fu wuxuu keenaa faa'iidooyin. Sababtoo ah farshaxanka Kung Fu - waa Buddhist Shaolin ama Daoist Wudang Kung Fu - waxa ku jira wax aan laga helin farshaxan kale. Waxaa loo yaqaan Qi Gong.
Waa maxay Qi Gong?
Qi Gong waa erey wada jir ah oo ka yimid sanadaha 1950. Hoos waxaa ku yaal dhammaan jimicsiyada saameynaya iyo xoojinta Qi, tamarta nolosha. Jimicsiyada badankoodu waxay ka badan yihiin kun sano. Xitaa raajisyada ka soo horjeeda macbudka Buddhist iyo Daoist ayaa ku dhaqma layliyada.
Jimicsiga Qi Gong dabiiciga ah
Si kastaba ha noqotee, Qigong ma aha oo kaliya door muhiim ah ee farshaxanka shiinayska, laakiin sidoo kale daawada dhaqanka ee Shiinaha, ama TCM loogu talagalay. Waxaa jira mid ka mid ah shanta tiir ee ay TCM dhisto. Noocyo kala duwan ayaa isku daraya si loo abuuro midnimo. Kuwaas waxaa ka mid ah nasashada, nabadda iyo dabeecadda, iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa, neefsashada iyo maskaxda maskaxda. Si ka duwan fekerka, halkan waxaa dhaqdhaqaaqa la xiriira nasashada. Neefsashada waxay ku dhacdaa wada noolaanshaha, dhaqdhaqaaqyadu way socdaan oo gaabiyaan.
Inkasta oo ay jirto erey la wadaago oo dhan, Qi Gong waa mid kala duwan. Tirada dhabta ah ee jimicsiga lama garanayo. Jimicsiyada kala duwan ayaa lagu sharxi karaa dhaqamada badan ee dhacay qarniyo badan. Masters ee qowmiyadaha qadiimiga ah ayaa nidaamka nidaamkooda u gaar ah u gudbiyay ardaydooda. Waxay markoodii hore isbeddeleen oo ay soo bandhigeen fikradahooda jimicsiga. Intaa waxaa dheer, fikrado badan oo cusub ayaa lagu daray in ay Qigong si aad ah ugu gaari karaan baraha ballaaran ee Europe iyo America.
Jimicsiga QiGong ee nabadda gudaha
Inkasta oo noocyada kala duwan, dhammaan tababarka Qi Gong waxay leeyihiin hal gool: in lagu dheellitiro Qi jirka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay nooca jimicsiga aad qabanayso. Jimicsiga shakhsi ahaaneed wuxuu la xiriiraa waddooyinka tamarta qaarkood, meridiyeyaasha, jirka aadanaha. Sidaa awgeed, saameynta layliyada way ka duwan tahay.
From waxbaridda TCM muujinaysaa in ma jiro kaliya hal nooc keli ah Qamaan, laakiin more: neefsashada Qamaan The, difaaca Qamaan, Qamaan cuntada, Qamaan loolalka, iyo xubin-Qamaan, taas oo iyana kasta gelin Organsigu waa kala qaybsan yahay. Dhamaan noocyada Qi waxay gaari karaan saxaarada, kuwaas oo mararka qaarkood dib loo celin karo. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay u baahan tahay jimicsi ku haboon oo ku saabsan saxaarada la siiyey.
Qawaani ahaan, Qi Gong waxaa loo baraa qaab sidan oo kale ah oo lagu dhaqmi karo iyada oo aan la ogeyn qaababka saxda ee shakhsi ahaaneed. Intaa waxaa dheer, Qi Gong wax lagu baro iskuulada fanka fanka ayaa aad ujeedadoodu tahay in la keeno Qiimeenta ardayga, isla markaana waxqabadka Kung Fu wax badan oo awood leh iyo firfircooni leh.
Jimicsiyada qaarkood waxay gaadheen heerka aqoonta iyo sida badanaa loo barto. Kuwaas waxaa ka mid ah siddeed layliyada adagba in dhaqdhaqaaqa 18 of Taiji Qigon, Ba Fanhuangong, Chan Mi xilkan, tobanaan meditations 5 xubnaha qigong, ciyaarta xoolaha 5 ama Meridian qigong.
Noocyada Qi Gong ma ahan mid kaladuwan oo keliya maaha iyo taxanaha jimicsiga, laakiin sidoo kale asal ahaan. Sida Kung Fu, Qi Gong wuxuu sidoo kale ku xiran yahay saamaynta diimaha waaweyn ee Shiinaha iyo Budhisnimada. Munaasabada Daoist oo ku taal Wudang-Shan, weligaa laguma baran doono Buddhist Shaolin Qi Gong iyo kan kale.
Chan Mi xilkan
Tusaale ahaan Buddhist Qi Gong waa Chan Mi Gong. Tan waxaa sidoo kale loo yaqaan qigong spinal. Xaqiiqdii, qaabkan, laf-dhabarka waxaa lagu dhaqaajiyaa iyadoo la adeegsanaayo naxaas la mid ah. Dhaqdhaqaaqa ugu dambeyntii wuxuu u wareegayaa jirka oo idil.
Maxaan cuni karnaa khudaarta?
Tusaale ahaan Daoist Qi Gong waa tobankii fikradood ee Mount Wudang. Layligani, diiradda waxay saarnaan doontaa mabda'a Daoiste ee isku dheelitirka iska horimaadka. Dhaqdhaqaaqa dhexe waa "ubaxa ubaxa furan", oo aan kaliya ku koobneyn shaqada jireed laakiin waxay ku lug leedahay naqshadaha ruuxiga ah.
Waxay qaadataa waayo-aragnimo badan oo dhaq-dhaqaaq ah si ay si sax ah u ogaato arrinta. Fikradaha Shiinaha iyo fanka dhaqdhaqaaqa waa sida badan oo ah sanadihii horumarinta iyo cabbirka Shiinaha u oggolaanayo. Si kastaba ha noqotee, kuwa bilowga ah, nooc kasta oo Qi Gong ah ayaa marka hore ku haboon. Dhamaan, jimicsiyada oo idil waxay leeyihiin hal gool oo isku mid ah: isku dheelitirka Qi ee isku mid ah.
Xorriyadda ka timaadda xanuun Caafimaad Caafimaad
Ka saar timaha / timaha jidhka - ...
Maqaayada guriga Wellness
Daryeelka jidhka ee ragga | Caafimaad qabka
T'ai Chi loogu talagalay nafta iyo jirka Caafimaadka Fayo-dhawrka
Lemon for caafimaadka iyo quruxda
Foornada saxda ah | Naadiyada qurxinta
Yoga | Cayaaraha iyo caafimaadka
Kala-beedka dabiiciga ah ee codsigooda Cosmetics & Caafimaad
Kombuyuutarada Dabiiciga ah | Cosmetics & Caafimaad
Farsamooyinka nasashada | Nasashada nadaafada
Feng Shui | Ka hortagga fayoqabka